Turkiga iyo Israel oo heshiis gaaray – Radio Muqdisho
Turkiga iyo Israel oo heshiis gaaray
Israel iyoTurkiga ayaa heshiis dhanka xiriirka diblomaasiyadda ah gaaray muddo lix sano kadib markii 10 kamid ah muwaadiniinta Turkiga ay ku dileen ciidanka Israel meel u dhow magaalada Gaza ee dalka Falastiin.
Arimaha ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa waxaa kamid ah in hey’adaha gargaarka Turkiga ay mucaawano gaarsiin karaan dadka Falastiiniyiinta ah ee ku dhaqan magaalada Gaza in Israel bixiso $20m (£15m) oo mag-dhow ah oo la siin doono ehelada dadkii ay laayeen ciidanka Israel iyo Turkiga uu mashaariic ka fuliyo Gaza.
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in tani ay tahay talaabo horumar ah isla markaana keeni karta in dhaqaalaha uu kordho.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa muujiyay in wax badan ka caawin doonto in ay soo hagaagto xaaladda bani’aadanimada ee magaalada Gaza.
Heshiiska ayaa maalinta Tallaadada waxaa saxiixi doona ra’iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim iyo Benjamin Netanyahu oo ah ra’iisulwasaaraha Israel, sida lagu sheegay khudbado si kala gooni gooni ah ay ugu kala jeediyeen magaalooyinka Ankara iyo Rome maanta oo Isniin ah.
Israel iyo Turkey ayaa lahaa xiriir aad u dhow ka hor inta aan commandos Isarel aysan ka hor istaagin markab sida mucaawano gargaar ah oo Turkigu leeyahay oo lagu magacaabo Mavi Marmara, kaas oo qeyb ka ah maraakiibta Isarel ee go’doomiyay magaalada Gaza waxayna dhacdadaasi dhacday 31 bishii May 2010-kii.
10 ruux oo ah dadka u ololeeya Falastiiniyiinta oo uu kamid ahaa nin heystay dhalashada dalka Mareykanka ayaa lagu diley weerarkaas markii ciidanka Israel ay markaba ugu soo daateen
Labada dhinac ayaa midba midka kale waxaa uu ku eedeyay rabshada. Ololeeyiyaasha ayaa sheegay in comandoska Israel ay rasaas ku fureen, halka Israel ay sheegtay in markii ay ciidanka ku dul dageen isla markiiba lagu weeraray midiyo iyo qoryo ay ka furteen.
Baaritaano ay QM sameysay ayaan lagu ogaan cida sida rasmiga ah ugu dambeysay weerarka ay ku dhinteen muwaadiniinta Turkiga.
Ciidan XDS oo dib ula wareegay deegaanka Goof-gaduud
Madaxweynaha oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka Belgium